1 အခမဲ့အပိုဆုကာစီနိုဂိမ်းများ | ထိပ်တန်းအပေါက်ဆိုက်ကို | အခမဲ့များအတွက်အသီးအတိုင် Play £ 800 ဆန်းစစ်ခြင်း
2 ဗိုလ်လုပွဲစာမျက်နှာ - ရယူ 100% ကြိုဆိုအပိုဆု £ 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
3 mFortune ကာစီနို | အွန်လိုင်းကာစီနိုပေါက်ဂိမ်းများနှင့်မိုဘိုင်းဘင်ဂိုကစား £ 100 ဦး ဆန်းစစ်ခြင်း
4 တင်းကြပ်စွာ slot မိုဘိုင်းကာစီနိုများနှင့်တိုက်ရိုက်စားပွဲတင်အားကစားပြိုင်ပွဲ - အခုတော့သိုက်! အလေးချိန်ပေါင်, Euros.500 ဆန်းစစ်ခြင်း
5 SlotFruity - £5အခမဲ့အပိုဆု! £€ 500 ဆန်းစစ်ခြင်း
6 Goldman ကာစီနို | £ $ € 1000 Deposit အပိုဆုအထိ Get £ 1000 ဆန်းစစ်ခြင်း
7 cool Play စကာစီနိုအွန်လိုင်း - အပိုဆု slot အားကစားပြိုင်ပွဲဆိုက်ကို £ $ € 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
8 slot ပုလင်း | အွန်လိုင်း & တယ်လီဖုန်းဘီလ်မိုဘိုင်း slot £ 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
9 ကံကောင်းပါစေကာစီနို | အဆိုပါခန်းမအခမဲ့အလှဆင် Play £ 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
10 Pocketwin ကာစီနို | အပိုဆု Up ကို£5သင်္ကေတပြ Get ££ 100 ဦး ဆန်းစစ်ခြင်း
11 အန်းဒရွိုက် slot | StrictlyCash.co.uk £ 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
12 ဖုန်းကိုဂတ်စ်ကာစီနို - မိုဘိုင်း & အွန်လိုင်း slot £ 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
13 ပေါင် slot ကာစီနို | အခမဲ့များအတွက် Lucky Angler Play £ 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
14 slots မိုဘိုင်းအွန်လိုင်းကာစီနို - ထိပ်တန်းအပိုဆု slot အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်း! £ $ € 1000 ဆန်းစစ်ခြင်း
15 LiveCasino.ie - အပိုဆု slot နှင့်ဂိမ်းများငွေဆကျဆံ £ $ € 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
16 ကာစီနိုဗြိတိန် | slots & Mobile ကကာစီနို £ 500 ဆန်းစစ်ခြင်း
17 မေးလ်ကာစီနို - safe & Fast ပေးချေမှု, Mobile နှင့်အွန်လိုင်း slot အားကစားပြိုင်ပွဲ £ 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
18 မိုဘိုင်းကာစီနိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆုကြေးငွေ | Express ကိုကာစီနို £ 200 ဆန်းစစ်ခြင်း
19 SlotMatic - ပထမဦးစွာတွင်£ 1000 အထိ2အပျငှေ ££ 500 ဆန်းစစ်ခြင်း